Freddie Ljungberg ayaa sharraxaad ka bixiyey sababtii uu uga baxay shaqaalaha tababarka ee Arsenal xagaagii tegay, markaas oo isagoo gacanyare u ah Mikel Arteta uu go’aansaday inuu ka dhaqaaqo Emirates Stadium.
43 jirkan ayaa kusoo laabtay Arsenal xili ciyaareedkii hore isagoo si ku-meelgaadh ah tababare ugu noqday markii shaqada laga caydhiyey Unai Emery oo November 2019 shandaddiisa qaatay.
Lix ciyaarood oo uu Freddie Ljungberg tababare u ahaa Arsenal ayay guuleysteen hal kulan oo kaliya, waxaanay barbarro galeen saddex halka labada ciyaarood ee kalena laga badiyey, ka hor intii aan Mikel Arteta loo magacaabin tababaraha rasmiga ah ee naadiga oo uu shaqada ku wareejiyey.
Freddie Ljungberg ayaa markaas kaddib waxa uu ka mid noqday shaqaalaha tababarka iyadoo uu gacanyare u noqday Mikel Arteta, balse si gaar ah loogu xilsaaray inuu soo carbiyo ciyaartoyda 15 jirrada iyo 23 jirrada.
Laakiin bishii August ayuu shaaciyey inuu iskaga tegay Arsenal iyadoo markaasna ay soo baxday inuu koox kale tababare u noqon doono, inkasta oo illaa hadda aanu shaqo cusub bilaabin.
Ljungberg ayaa hadda aamusnaanta ka baxay oo sharraxaad ka bixiyey sababtii uu uga tegay Arsenal, waxaanu yidhi: “Waxa isbeddelay ayaa waxa uu ahaa in maalinta ciyaarta aan soo fadhiisto xagga sare oo aan daraaseeyo ciyaarta. Waxay ahayd inaan wax ka idhaahdo sida kooxda naga soo horjeedda noosoo cadaadiso.
“Haddii ay jiraan meelo bannaan, haddii aanu mid ka mid ah ciyaartoydu laynkiisa qabsanayn, haddii aanu ka weeraranayno dhinacaas iyo haddii ay dhibaato naga haysato wax uun wixii aanu ciyaartoyda kusoo tababarnay toddobaadka oo aanay si fiican u qbanayn.
“Way adag tahay inaad aragto wax kasta marka aad halkaa fadhido, markaa waxa aan qaadanayay qoraal, waxaan samaynayey sawirro, waxaan la hadlayay ciyaartoyda, waqtiga nasashada oo aan la fadhiisto iyo inaan u sheego wixii aan arkay.
“Dabcan, way ka duwanayd marka aad kursiga fadhido laakiin shaqaalaha Mikel Arteta ayaa sidaa doonayay, aniguna waan ka aqbalay.”
Markii uu kooxda ka tegay, Mikel Arteta ayaa shaaciyey inuu hubo inuu Freddie Ljungberg dib ugu soo laaban doono kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Freddie dhab ahaantii xubin muhiim ah ayuu noo ahaa tan iyo imaatinkaygii. Wuxuu qabtay shaqo cajiib ah markii uu Unai tegay, waxaananu u haynaa ixtiraam boqolkiiba boqol ah shaqsi ahaan iyo tababare ahaanba. Waxaan ogahay in mustaqbalka aanu ku kulmi doono laynka garoonka.”